▷ Hishiisyada kaararka SD ee Isniinta ugu wanaagsan Cyber ​​​​ee Nintendo Switch waa kuwan - 【Isbarbardhigga】 2022
Heshiisyada kaararka SD ee Cyber ​​​​Isniinta ee ugu wanaagsan ee Nintendo Switch ayaa halkan jooga
Heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta ayaa bilaabaya inay soo baxaan, iyo haddii aad raadinayso balaadhinta kaydinta 1TB ee weyn ama in ka yar 128GB, waxaanu helnay heshiisyada kaararka SD ee Cyber ​​​​Isniinta ee ugu wanaagsan US USA iyo UK.
Maaddaama Nintendo Switch uu la yimaado qadar yar oo kaydinta gudaha ah (32GB oo ah moodeelkii asalka ahaa iyo 64GB ee moodka OLED), waxa ay u badan tahay in aad rabto in aad ku cusboonaysiiso kaydintaada kaadhka SD si aad u kaydiso tiro badan oo ciyaaro ah. eShop, oo haddii aad dooratid mid ka mid ah heshiisyadan Cyber ​​​​Isniinta, waligaa kama walwasho kaydinta mar kale.
Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso xawaaraha kaydinta iyo wareejinta marka aad iibsanayso kaarka SD. Nintendo waxa kale oo ay ku talinaysaa kaadhka xusuusta xawaarihiisu sarreeyo ee waxqabadka ugu fiican, markaa raadi kaarka taageerada UHS-I iyo ugu yaraan 'xawaaraha akhriska' ee 60-95MB / s (dhammaan kaadhadhka hoos ku xusan waa waafaqsan yihiin shuruudahan). halka xawaaruhu xawliga ku socdaa uu hubinayo inaadan fadhiisan agagaarka sugitaanka faylashaada si ay uga soo wareejiyaan kaarka SD-kaaga.
Waxaan aragnay qaar ka mid ah heshiisyada kaararka SD ee weyn Jimcihii Black, iyadoo qaarkood ay sii socdaan Cyber ​​​​Isniinta, halka heshiisyada cusub ay sidoo kale hoos u dhacayaan. Oo hubi inaad hubiso heshiisyadayada Cyber ​​​​Isniinta Nintendo Switch haddii aad wali mid raadinayso.
Waxaad si toos ah uga heli doontaa heshiisyada US hoos iyo heshiisyada UK wax yar ka hooseeya bogga; Haddii aadan joogin US ama UK, u rog gunta hoose ee maqaalkan si aad u aragto heshiisyada aaggaaga.
1 Heshiisyada ugu Wanaagsan ee Maanta ee Nintendo Switch Cards SD gudaha Mareykanka
2 Kaarka SD ee ugu wanaagsan Cyber ​​​​Isniinta UK ee loogu talagalay Nintendo Switch
3 Wax badan oo kaarka SD ah ee Isniinta Isniinta
4 Heshiisyo badan oo Cyber ​​​​Isniin ah
Heshiisyada ugu Wanaagsan ee Maanta ee Nintendo Switch Cards SD gudaha Mareykanka
Kaarka SD ee ugu wanaagsan Cyber ​​​​Isniinta UK ee loogu talagalay Nintendo Switch
Wax badan oo kaarka SD ah ee Isniinta Isniinta
Meel kasta oo aad ku nooshahay, hoos waxaa ah heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta ee ugu fiican ee kaararka SD iyo microSD ee shabakada.
Heshiisyada Micro SD Switch ugu fiican ee xilligan
Heshiisyo badan oo Cyber ​​​​Isniin ah